Ebook efu: Gee nti! Ntị na-elekọta mmadụ maka azụmaahịa mara mma | Martech Zone
Ebook efu: Gee nti! Ntị na-elekọta mmadụ maka azụmaahịa mara mma
Wednesday, October 16, 2013 Wednesday, October 16, 2013 Douglas Karr
Na-eme ha n'ezie dị ka gị? O siri ike ịchọta ụbọchị ndị a.
Ige ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na nkà na ụzụ kachasị dị ịrịba ama iji kụrụ ahịa ebe ọ bụ na mgbasa ozi mgbasa ozi n'onwe ya. Ndị anyị nwere azụmaahịa ọdịnala na-echeta ụbọchị mgbe ịghọta onye onye ahịa gị bụ na ihe ha chere maka gị chọrọ ntuli aka, otu ndị na-elekwasị anya, na / ma ọ bụ ịchụpụ nyocha siri ike na ụlọ ọrụ ọzọ, ha niile were oge na ego karịa. anyị chọrọ.
Thesebọchị ndị a, ndị ahịa bara uru na nghọta nke ụlọ ọrụ na-adịbu ọnụ, na-eri oge na akụkọ ihe mere eme ozugbo bụ ezigbo oge na mfe. Nlekọta mgbasa ozi mmekọrịta abụghị naanị maka ịzụ ahịa: ị nwere ike ịge ntị maka usoro ụlọ ọrụ, nyocha asọmpi, nghọta ngwaahịa, yana ọtụtụ okwu ndị ọzọ. Oge ọ bụla ịchọrọ ịmata ihe ndị ọzọ na-ekwu gbasara ihe metụtara azụmahịa gị, ịge ntị mmadụ bụ ụzọ dị mfe na ụzọ dị mfe iji chọpụta.
Ike nke mgbasa ozi mmekọrịta bụ netwọk mmekọrịta na ọdịnaya gị bụ mmanụ ya!
Ndị nkwado anyị na Agbaze mmiri weputara akwukwo ohuru ha, Gee Ntị: Ntuziaka Nkọwa iji Jiri Ntị Na-ahụ Maka Ọha na Ọha mara Aka edere ya Leslie Nuccio. Leslie na-abanye na nlekota mgbasa ozi mmekọrịta.
Ntuziaka a zuru oke na-ejegharị azụmaahịa site otu esi akwọ ụgbọala Okwu-nke-n'ahịa Marketing, na-achọpụta ma ndị ahịa gị na atụmanya na-amasị gị n'ezie, Otú na-tabs na mpi, Otú mata onye na-ekwu okwu gbasara azụmahịa gị, otu esi chọta mkparịta ụka dị mkpa na otu esi amalite meme nke gi! Ọ gafere peeji 30 mara mma jupụtara ọchị, ihe atụ mara mma, stats, nkọwa na ozi ị nwere ike iji mee ka nsonaazụ azụmaahịa dị ugbu a.
You'll ga-amụta ihe nlekota oru mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ, otu esi eji nlekota mgbasa ozi na-elekọta mmadụ n'ofe ụlọ ahịa gị na karịa, na ihe kpatara ahịa mgbasa ozi ji elekọta mmadụ.
Ka emechara, na Twitter ọrụ naanị na-ezipụ ihe nkezi 400 ijeri tweets kwa ụbọchị, o bughi uru onu ogwu dijitalụ?
Tags: ige ntị na-asọ mpiebookgee ntịnyochaa asọmpi gịna-elekọta mmadụ na-ege ntịnlekota oru mgbasa ozinlekota oruụmụ nwanyịire okwu onu
MarketingPilot: Microsoft Dynamics CRM Njikọ Njikọ Njikọ
Nduzi Social Media maka Ndị Ọkachamara Ego